Ihe ndị a bụ ozi niile sitere na Google maka 2019 | Akụkọ akụrụngwa
Ihe ndị a bụ ozi niile sitere na Google maka 2019
Ụlọ Ignatius | | Emelitere na 08/05/2019 11:42 | General
Google emere ụnyaahụ, nzukọ kwa afọ ebe ọ na-eweta ihe niile akụkọ ga-abata n'afọ niile n'ụdị ngwaọrụ, ọrụ, sistemụ arụmọrụ, ngwa ọhụrụ ... Anyị erutela ebe ihe ọhụrụ abụrụla ihe dị oke ọnụ ahịa yana Google, dịka Apple na mbụ, ewetaghị anyị ọrụ ọ bụla ga-eme ka uche anyị meghee.
Na mgbakwunye na ịnye gam akporo Q, ọ bụ ezie na ọ kpughere aha zuru oke nke nsụgharị ọzọ nke gam akporo, ụmụ okorobịa si Sundai Pichai gosipụtara ọdụ ọhụrụ ọhụrụ: Google Pixel 3a na 3a XL, ọnụ abụọ nwere atụmatụ site na afọ atọ gara aga, ebe elu, ala na okpokolo agba na-enwu oke. Na mgbakwunye, ọnụahịa ya anaghị eso ọtụtụ.
1 Gịnị bụ ihe ọhụrụ na gam akporo Q
1.1 Akpaka Ibọrọ na ificationsma Ọkwa
1.2 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị
1.3 Mmegharị ọhụụ iji ngwaọrụ a na-emekọrịta ihe
1.4 Foldable smartphone ndakọrịta
1.5 Enyemaka Google dị na ọnụ
1.6 Smartphones dakọtara na gam akporo Q beta
2 Google Pixel 3a na Pixel 3a XL
3 Duplex, otu nzọụkwụ n'ihu
Gịnị bụ ihe ọhụrụ na gam akporo Q
Agbanyeghị na ụdị gam akporo ọzọ, Q, anọnyere anyị ọnwa ole na ole, rue ugbu a, nnukwu ọchụchọ ahụ ekwuputaghị ọkwa nke ọzọ. Na ihe omume a, ụfọdụ n'ime ozi ọma nke ga-abịa site n'aka nsụgharị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo maka smartphones dakọtara.
Na mwepụta nke Android achịcha, tiori bụ na ekele na Project Treble, nnabata nke a gam akporo ga-adị ngwa ngwa site na ndị ọrụ, mana ọnwa itoolu ka e mesịrị, A na-ahụ gam akporo achịcha na 10% nke ngwaọrụ, ọnụọgụ nwere nchekwube maka nkwupụta Google.
Project Treble bụ nzọ Google iji mee ka mmelite dị ngwa, ebe ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ na sistemụ arụmọrụ na-dakọtara na niile ama mmiri, na-ahapụ naanị ndị nrụpụta ka hazie akwa mkpuchi ha.
Akpaka Ibọrọ na ificationsma Ọkwa
Kwa ụbọchị anyị na-anata ọtụtụ ọkwa, ụfọdụ n'ime ha enweghị ike ịbara anyị uru n'oge akọwapụtara. Na gam akporo Q, njikwa nke ọkwa, ọ bụrụ na ọ dị mma na ya, ugbu a na-akawanye mma, Ebe ọ bụ na ọ ga-eme ka anyị mechie ngosi nke ụfọdụ ngwa n'oge oge izizi.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịgbalite ọnọdụ echegbula, mana ikwe ka ụfọdụ ozi izi ozi, dịka ọmụmaatụ, iji gwa anyị ozi ọhụụ, ọrụ Ezigbo maka mgbe anyị na-enweghị ike ikwu na ekwentị ma anyị na-eche ozi ma ọ bụ email.
Ọzọ nke kachasị adọrọ mmasị na ụdị esote nke gam akporo, ga-abụ akpaka Ibọrọ dị na ificationsma Ọkwa. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-enwe ike ịza ngwa ngwa na-enweghị ịmeghe ọnụ, tinye ngwa ma dee azịza ya. Ọrụ a yitere ọrụ anyị nwere n'aka Gmail ozugbo.
Fọdụ ndị ọrụ kwenyere na ọnọdụ ọchịchịrị ahụalarịrị ala amụrụ na gam akporo, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ụfọdụ ndị nrụpụta nyere ya site na akwa mkpuchi ha, mana ọ bụghị. Site na mwepụta nke gam akporo Q, Google ga-enye gị ohere iji ọnọdụ gbara ọchịchịrị na njedebe anyị dakọtara, ọnọdụ gbara ọchịchịrị nke ahụe ga-ahụ na ngwa niile dị na ya na-akpaghị aka mgbe arụ ọrụ ya.
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị, na mgbakwunye na ọmarịcha ọhụụ ọ na-enye anyị, na-enye anyị ohere ịchekwa nnukwu batrị ọ bụrụhaala na ọnụ anyị na-etinye ụdị ihuenyo OLED, ebe ọ bụ na teknụzụ a Gbanwuo Naanị ndị LED na-egosi agba ọzọ karịa nwa. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime interface, gụnyere ndabere bụ nwa, ọ dịghị mkpa ka ìhè niile na ihuenyo dị ka ọ na-eme na omenala LCD ákwà.
Mmegharị ọhụụ iji ngwaọrụ a na-emekọrịta ihe
Na ntọhapụ nke A gam akporo, Google malitere iwebata mmegharị ahụ na ihuenyo ahụ iji nwee ike ịgagharị na sistemụ arụmọrụ, n'ihi mkpa nke ndị nrụpụta, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha ahọrọla ma ọ bụ na-eme bọtịnụ ndị soro anyị kemgbe ụdị mbụ nke gam akporo na-apụ n'anya. Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n’ime ha yiri ndị nke Apple webatara site na iPhone X, n’ezie isi iyi nke mmụọ nsọ maka Apple bụ jailbreak na Palm.
Foldable smartphone ndakọrịta
Mgbe Samsung webatara Galaxy Fold, ụlọ ọrụ Korea kwuru na ya na Google rụkọrọ ọrụ aka iji megharịa Gam akporo na ụdị ihuenyo na uru ha na-enye anyị maka ihu nke smartphones. Dị ka ọkwa nke ụfọdụ ọnụ, Google ga-emegharị interface ya na ụdị ọnụ a.
Enyemaka Google dị na ọnụ
N'adịghị ka sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, dịka iOS, iji nwee ike iji onye enyemaka aka, ọ dịghị mkpa ịnweta njikọ ịntanetị, nke mere na ọ bụrụ na anyị ejiri ọnọdụ ụgbọ elu rụọ ọrụ ma ọ bụ na anyị enweghị onwe anyị, anyị ga-enwe ike ịjụ Google ka o gosi anyị ụfọdụ onyonyo, iji rụọ ọrụ ma ọ bụ kwụsị ụfọdụ ọnọdụ nke ọdụ anyị, iji chekwaa nọmba ekwentị ...
Ọzọkwa, mgbe anyị malitere mkparịta ụka na Google, onye inyeaka ga-eche maka sekọnd ole na ole iji chọpụta ọ bụrụ na anyị chọrọ ịjụ otu ajụjụ ma-ọbụ na-agbanyeghị na afọ juru anyị mkpa anyị ma ọ bụ ịmata nke oge a, na-ezere na anyị ga-akpọku onye enyemaka ahụ ugboro ugboro mgbe anyị chọrọ ịjụ ọtụtụ ajụjụ.
Smartphones dakọtara na gam akporo Q beta
N'afọ gara aga, ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọnụ dakọtara na beta nke mbụ nke gam akporo dị obere, na-ejedebe naanị ụdị 7. Oge nke a, Google jisiri ike dọta ndị nrụpụta karịa na mmemme beta aYa mere, ọnụ ọgụgụ nke smartphones dakọtara na gam akporo Q beta, nke ga-esokwa n'etiti ndị mbụ a ga-emelite na ụdị ọzọ nke gam akporo, bụ 21:
Google Pixel 3a na Pixel 3a XL
Fewbọchị ole na ole gara aga, Google n'onwe ya ghọtara na ọrịre nke Pixel 3 na 3 XL adịghị ka atụ anya ya, agbanyeghị, ọ dị ka nnukwu ọchụchọ ahụ ka na-akụ nzọpụta nke ya. N'ezie, ha chọrọ iru ndị na-ege ntị karịa ma maka nke a, ha gosipụtara ihe ọhụrụ Pixel 3a na 3a XL na ihe omume ahụ, ekwentị abụọ nwere atụmatụ mara mma ma nke ahụ Ha na-enye anyị ihe dịka ọrụ dịka Pixel 3 na 3 XL.
N'ezie, ụdị ndị ọhụrụ ahụ anaghị ejikọta Visual Core, ihe nhazi ahụ bụ maka ọrụ nhazi njigide nke flagship nke ụlọ ọrụ ahụ natara na nyocha ndị ahụ. Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche atụmatụ ahụ na mgbakwunye na ọnụahịa nke ọnụ abụọ ahụ, 399 na 479 euro n'otu n'otu, na imewe a dị m ka obere ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị enweta Google na ọdụ ndị a. Ọzọkwa, A na-eji plastik eme ha ma ghara inye usoro ikuku ikuku.
Imirikiti ndị ọrụ na-adabere na aesthetics nke ọnụ mgbe ịzụrụ ya, na-ahapụ uru. Naanị ihe anyị ghọtara kachasị banyere isiokwu a, anyị na-eleba anya ọ bụghị naanị na imewe ahụ, kamakwa na njirimara, ike, nhazi, nchekwa, ihe eji emepụta ihe ... Na ahịa ma Xiaomi na Huawei ma ọ bụ Samsung na-enye anyị ọdụ ndị dị oke yiri na arụmọrụ teknụzụ mana nwere njiri mara mma karịa Pixel 3a na 3a XL.
N'ụzọ ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na mputa ahụ enweghị isi n'ebe ị nọ, o yikarịrị ka ndị niile na-enye anyị n'ime ma ọ bụrụ na ịmee. Ihe ọhụrụ Google Pixel 3a na-enye anyị sistemu na-acha ọkụ ọkụ nke na-ewe naanị nkeji 15 nke ịgba ụgwọ na-enye anyị nnwere onwe nke ihe ruru 7 awa. Igwefoto ahụ ga-enyere anyị aka ijide nkọwa niile na agba n'ọchịchịrị na-enweghị iji flash, yana ekele maka Foto Google, anyị nwere ike ịchekwa ọdịnaya niile kpamkpam n'igwe ojii.
Dị ka ọ dị na mbụ, Google na-enye anyị nche na sistemụ arụmọrụ maka afọ 3, n'ihi na ọnụ anyị na-echebe mgbe niile na arụmọrụ ya kachasị mma. Ọ bụ ezie na taa o yiri obere ihe, ọ gụnyere ọdụ ụgbọelu. N'ebe a, anyị na-egosi gị nkọwa zuru oke nke Google Pixel 3a na Google Pixel 3a XL.
Naanị na isi ihe dị iche dị na ihuenyo, ebe ọ bụ na Pixel 3a nwere ihuenyo 5,6 nke anụ ọhịa mgbe 3a XL ruru 6 sentimita asatọ, ma ihuenyo abụọ na teknụzụ OLED. N'agbanyeghị igosipụta ogwe osisi na-emesapụ aka, ihe mmetụta mkpịsị aka dị na azụ nke ọnụ.
IKIRU 5,6-inch OLED nwere mkpebi FullHD + (2.220 x 1.080 pikselụ) na 18,5: 9 ihuenyo ruru 6-inch OLED nwere mkpebi FullHD + (2.160 x 1.080 pikselụ) na 18: 9 ihuenyo ruru
Nhazi Snapdragon 670 na Adreno 615 GPU Snapdragon 670 na Adreno 615 GPU
Nchekwa n'ime 64 GB 64 GB
Gbanwee CAMERA Sony IMX363 nke 12,2 MP nwere oghere f / 1.8 na OIS + EIS Sony IMX363 nke 12,2 MP nwere oghere f / 1.8 na OIS + EIS
N'ihu CAMERA 8 MP nwere oghere f / 2.0 8 MP nwere oghere f / 2.0
UMUAKA 3.000 mAh nwere 18W Fast Charge 3.700 mAh nwere 18W Fast Charge
OS A gam akporo 9 achịcha A gam akporo 9 achịcha
Njikọ USB-C 2.0, nano SIM, WiFi ac 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, Aptx HD, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS USB-C 2.0, nano SIM, WiFi ac 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, Aptx HD, NFC, Google Cast, GPS, GLONASS
NDỊ ọzọ Onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, 3.5mm jack, Edge nọ n'ọrụ Onye na-agụ akara mkpịsị aka azụ, Edge nọ n'ọrụ, jaak 3.5mm
Mbibi na ibu ibu X x 151,3 70,1 8,2 mm
147 grams X x 160,1 76,1 8,2 mm
Ahịa 399 euro 479 euro
Duplex, otu nzọụkwụ n'ihu
Teknụzụ Google nke Duplex gosipụtara anyị n'afọ gara aga etu esi ekwe omume Tinye tebụl na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ site na oku na-eji Google Assistant. Guysmụ okorobịa nọ na Sundai Pichai chọrọ ị nweta teknụzụ a ọzọ ma tinye ya n'ọrụ na webụ. N'ụzọ dị otú a, onye inyeaka ga-enwe ike itinye ozi anyị, dịka ọmụmaatụ, ịchekwa ụgbọ ala, na-eleba anya ụbọchị nke njem anyị mere ndokwa na-enweghị ike ịme ihe ọ bụla na usoro ahụ.
Google jisiri ike banye ọtụtụ ụlọ site na Homelọ Google, ọkà okwu okwu nke ụlọ ọrụ ahụ, mana ọ nwere enweghị ngwaọrụ nwere smart nwere ihu igwe ezubere iji jikwaa ụlọ ọgụgụ isi, dị ka Nest Hub Max, ngwaọrụ nke anyị nwere ike iji kpọọ oku vidiyo. site na Google Duo site na igwefoto igwefoto obosara, na ntaneti intaneti, na-ekiri telivishọn ... akwu Hub Max, bụ ntinye aka gị na mpaghara a, ebe Amazon enyelarị ọtụtụ ngwaọrụ, dị ka Facebook na Portal.
Typedị ngwaọrụ a anyị nwere ike idowe n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ, emebere iji mee ihe na kichin. Na-agbakwunye ihuenyo 1 inch ọ na-enye anyị ohere ịnweta ụwa Google dum site na ogwe aka. Google ejirila teknụzụ nke Nest, ụlọ ọrụ na-eme ese foto na ọ zụtara afọ ole na ole gara aga, na ngwaọrụ a.
Nest Hub Max ga-adị n’oge ọkọchị maka $ 229 na United States, agbanyeghị, ụlọ ọrụ ahụ na-azọrọ na n’ọnwa ndị na-abịanụ, ọ ga-adịkwa na mba 12 ọzọ. otu nke bụ Spain, ọ bụ ezie na anyị amaghị ego ọ ga-akwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ndị a bụ ozi niile sitere na Google maka 2019
Anyị na-enye gị ọnwa atọ nke Amazon Music Unlimited [Onyinye Efu]
Nyocha nke ọkà okwu Urban Box 7 si Energy Sistem